PressReader - Ilanga: 2018-02-12 - UMBONO WOMHLELI: Makuthathwe isinqumo esiwujuqu ngoMnu Zuma
UMBONO WOMHLELI: Makuthathwe isinqumo esiwujuqu ngoMnu Zuma
Ilanga - 2018-02-12 - Bono - PHILANI MGWABA
ISIMO esikhona ezweni, lapho kunezinkulumo ezithi umengameli wezwe, uMnu Jacob Zuma akafuni ukwehla esihlalweni, kasemukeleki neze ngoba sinomthelela omubi ezinhlelweni zikahulumeni nasemnothweni wezwe.
Sekuwumlando ukuthi ukuvulwa kwephalamende nokwethulwa kwenkulumo kamengameli ebhekiswe esizweni (iState of the Nation Adress - Sona), kuhlehlisiwe ngusomlomo wephalamende, uNkz Baleka Mbete, ngesonto eledlule ngenxa yokuthi amaqembu aphikisayo abesabisa ngokuphikisana nokuthi le nkulumo yethulwe nguMnu Zuma.
Abekusho lokhu ngesizathu sokuthi usephelelwe yisikhathi, ngisho neqembu lakhe, i-African National Congress (ANC) lisezinhlelweni zokumkhipha.
Sekuphele cishe isonto uMengameli we-ANC, uMnu Cyril Ramaphosa, exoxa noMnu Zuma ukuba ashenxe kodwa kayikabonakali imiphumela yalezi zingxoxo.
Izwe limanzonzo, abantu balindele ukuba kucace ngokushesha ukuthi kwenzekani, futhi sebeqala wukuphelekwa yisineke. Lesi simo kasamukeleki.
Imibuzo esematheni wukuthi ngabe yiziphi lezi zizathu ezinika uMnu Zuma ilungelo lokukwazi ukudaza inkani, anqabe ukwehla esikhundleni kungabi ndaba zalutho.
Omunye umbuzo osematheni, uthi ngabe bukhona yini ubulungiswa nxa umuntu oyedwa (uMnu Zuma) ekwazi ukumisa izinhlelo zombuso nokusebenza kukahulumeni, kuze kube kwenzeka intando yakhe neyomndeni wakhe.
Sekucacile futhi ukuthi kunokudideka kubalandeli boku- qina bakaMnu Zuma, abangafuni nokuyizwa indaba yokuthi iqhawe labo likhishwe esikhundleni ngoba bethi wakhethwa ukuba aphathe iminyaka eyisihlanu, ezophela ngonyaka ozayo emuva kokhetho lukazwelonke.
Okufanele bakwazi wukuthi ngokomthethosisekelo wezwe, umengameli akakhethwa wuquqaba lwabavoti ukuze abe kulesi sikhundla, kodwa ukhethwa yiphalamende.
Abavoti bavotela iqembu okhethweni lukazwelonke, bese kuba yilona eliphakamisa igama lalowo ozolimela okhethweni lwesikhundla sokuba ngumengameli wezwe uma sekuvotwa ephalamende.
Igama likaMnu Zuma nje, laphakanyiswa yiqembu lakhe i-ANC ephalamende ukuba abe ngumengameli wezwe, wabe esevotelwa yiningi lamalungu alo (ephalamende).
Ngakho-ke ubuholi be-ANC, bunelungelo lokuhoxisa igama lomuntu elamuqokela isikhundla sokuba abe ngumengameli wezwe, okunguMnu Zuma, njengoba kwenzekile ngowezi-2008 lapho leli qembu ebeliholwa nguyena uNxamalala belu, litshele uMnu Thabo Mbeki ukuthi makabeke phansi izintambo zobungameli, walilalela.
Ukuze izinto zihambe ngokomthetho wezwe, osekufanele i-ANC ikwenze manje njengoba uMsholozi kubukeka sengathi akafuni ukwenza njengoba etshelwa, wukuthi ibuyele ephalamende, ifake isicelo kusomlomo sokuba kube nenkulumo-mpikiswano mayelana nokuphatha kukamengameli, bese amalungu evota ukusho ukuthi ngabe kusafanele yini aqhubeke aphathe izwe noma cha.
Okugqamayo wukuthi uma kwenziwe njalo, sekuyobe kuphelile ngoMnu Zuma ngoba ngisho ingane encane iyazi ukuthi amalungu ephalamende awasamnambithisisi, ngakho ayomkhomba indlela.
Njengoba kucaca ukuthi uMnu Zuma akazimisele ukwenza njengoba etshelwa yiqembu lakhe, sinxenxa isigungu esiphezulu saleli qembu esizoba nomhlangano ophuthumayo namhlanje ukuba sithathe isinqumo esingumqamlajuqu ngaye.
Kakwamukeleki neze ukuthi kume yonke into ezweni, kulindwe ukuthi kwenzekani ngoNxamalala.
Isimo somnotho sibi kakhulu, izwe lidinga kuthathwe izinqumo ezinqala ukulungiswa okuningi okonakele ezweni eminyakeni edlule.